Dibadbax Ballaaran oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. - Caasimada Online
Home Warar Dibadbax Ballaaran oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Dibadbax Ballaaran oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
kadib ku dhawaaqisti Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya maalintii shalay banaanbax balaaran oo lagu soo dhawaynayo Golaha Wasiirada ayaa waxaa uu ka dhacay Muqdisho
Dad tiradooda ay ka badnayd Boqoleeyo dadweyne ayaa kasoo qeybgalay banaanbaxa kuwaasi oo isugu soo baxay Degmada Xamarweyne ee Gobalka Banaadir iyadoo sidoo kale banaanbaxa uu kasoo qeybgalay maamulka Degmada Xamarweyne.
Banaanbaxa ayaa waxaa ka hadlay Guddoomiyaha Degmada Xamarweyne C/laahi Ibraahin Sahal Gardhuub kaasi oo sheegay in ujeedka banaanbaxa uu yahay taageero loo muujinaayo Xukuumadda cusub ee dalka Soomaaliya.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in hadii ay yihiin maamulka Degmada Xamarweyne ay soo dhaweynayaan wasiirada cusub ee shalay lasoo magacaabay.
Wasiirada Maalinti shalay Ra’isul Wasare Saacid uu ku dhawaaqay ayaa ahaa Tobon wasiir waxaana xilal fiican ka qabtay haween.